Allocadia: Vaka, Teedzera, uye Pima Zvirongwa Zvekushambadzira uine Great Confidence Uye Kudzora | Martech Zone
Allocadia: Vaka, Teedzera, uye Pima Zvirongwa Zvekushambadzira uine Great Confidence Uye Kudzora
Chipiri, Mbudzi 28, 2017 Chipiri, Mbudzi 28, 2017 Jeff Epstein
Kuwedzera kuomarara uye kuwedzera kumanikidza kuratidza kukanganisa ndizvo chete zvikonzero zviviri nei kushambadzira kuri kunetsa nhasi kupfuura zvazvakamboita kare. Iko kusanganiswa kwenzira dzinowanikwa, vatengi vane ruzivo, kuwanda kwedata, uye kudikanwa kwenguva dzose kwekuratidza mupiro kumari nezvimwe zvinangwa zvakakonzera kuwedzera kumanikidza kune vashambadziri kuti vave vanoronga kufunga uye vatariri varinani vemabhajeti avo. Asi chero bedzi ivo vachiri vakanamatira kuyedza kuteedzera zvese izvi pamaspredishiti, ivo havazombofa vakakunda aya matambudziko. Nehurombo, ndiyo mamiriro eiyo 80% yemasangano maererano neongororo yedu ichangoburwa.
Allocadia Kushambadzira kuita Management Management Solution Kuongorora
pinda Allocadia, software-se-se-sevhisi yekushambadzira manejimendi manejimendi dhizaini yakagadzirirwa nevashambadzi, kune vashambadzi, iyo inopa nzira iri nani yekuvaka zvirongwa zvekushambadzira, maneja mari, uye kuyera kukanganisa kukambani. Allocadia inobvisa ese ekuronga uye ebhajeti maspredishiti uye inogadzira chaiyo-nguva nzwisiso yemashandisirwo emamiriro uye kushambadzira ROI. Nekubatsira vatengesi Kumhanya Kushambadzira zvakanyanya, Allocadia inobatsirawo vashambadzi Kuita Kushambadzira zvakanyanya.
Iyo Allocadia chikuva inodzika pasi kuita matatu epamoyo kugona: Kuronga, Kuisa Mari, uye Kuyera Mhedzisiro.
Ngatitangei neako epagore kuronga kutenderera. Allocadia inogadzira chimiro chakamisikidzwa uye mutero wekuti iwe nechikwata chako muchafamba sei kuvaka chirongwa chenyu chekushambadzira. Kunyangwe yakarongedzwa nejogirafi, bhizinesi unit, chigadzirwa, kana kumwe kusanganisa kwezviri pamusoro, chimiro cheAllocadia chinoshanduka chinoratidza maitiro aunoda kutarisa bhizinesi rako. Ingo gadzira yako yaunoda hutongi, wobva wagovera inosanganisirwa kumusoro-pasi kushandisa zvinangwa Izvi zvinosanganisira hafu yekutanga yechirongwa chako, uye inopa gwara rakajeka kune vanobata bhajeti pamaitiro avanofanira kunge vachigovanisa mari yavo kubva pasi kumusoro (iyo hafu yepiri), nenzira inoenderana zvizere kune zvese kudyara uye zvakakosha zvirongwa.
Iine wese munhu anoshandisa iyo imwecheteyo system, achitevera iwo mamwe mazita ekuti magungano, nekumaka zvinhu nenzira dzakakodzera, iwe zvino uchakwanisa kukwirisa ese akasiyana ezasi-kumusoro ezvehurongwa mune imwechete yakazara, muchinjikwa-wesangano maonero. Iwe unozogona kuwona kuti uye kupi uye kuti zvirongwa zvako zvese zvakarongerwa kudonha, marii yavanoda kuita, uye izvo zvinotarisirwa kukanganisa pamari ichave iri.
Kuisa mari neAllocadia
Kana imwe nguva yakapihwa yaitika, vatengesi vanofanirwa kuziva pavanomira pamubhadharo uye bhajeti iripo kuti vazive kuti ingani nzvimbo yavanofanira kugadzirisa uye kugadzirisa. Asi kana vakavimba nechikwata chekuverenga kuti chivaunzire ruzivo urwu, vangangove panjodzi yekumirira kwenguva yakareba kana kuti havazowana iyo data yavanoda mumhando chaiyo Imhaka yekuti Zvemari zvinotarisa pasi rose mumaGL account, kwete zvirongwa kana zviitiko zvinoitwa nevashambadzi.
Allocadia inogadzirisa dambudziko iri nekuunza kunze nekungoerekana wapa data revoice kubva kuMari kuenda kurudyi bhajeti zvinhu zvinhu muAllocadia kuitira kuti vatengesi vagone kuona izvo zvavakashandisa, izvo zvavanoronga kushandisa, uye izvo zvavakasiya kushandisa. Iye zvino vanogona kuve vakagadzirira mikana sezvavanomuka, vasinganetseke nezvekuenda pamusoro kana pasi pebhajeti. Nekuti kana nguva yacho yapera, kutakura mari isiri kushandiswa kumberi kunowanzove patafura.
Kuyera Mhedzisiro neAllocadia
Nhanho yekupedzisira munzira yeku ROI kazhinji ndiyo yakaoma kwazvo. Kugona kusunga pombi uye mari kune zvekushambadzira zviitiko nemishandirapamwe chinhu chisingaite kutsvaga - pamberi peAllocadia. Nokubatanidza CRM dhata yakanangana netambo zvinhu muAllocadia, tinoita kuti zvive nyore kubatanidza madota pakati pekudyara kwako uye kukanganisa kwavari kutyaira. Iye zvino unogona kuve neyako hurukuro paKushambadzira ROI, uye kuratidza kune vamwe vese vekambani kuti izvo zvaunoita kutyaira chaiko, kuyerwa kukanganisa pane bhizinesi. Nesimba rekupa modelling uye ruzivo pane ROI nechinangwa, iwe uchave uri nani kuziviswa kusarudza kwaunoshandisa yako inotevera yekushambadzira dhora.
Mhanya Kushambadzira Zvirinani Saka Iwe Unogona Kuita Kushambadzira Zvirinani
Kubva pamashandisirwo emari ekuenzanisira kumamiriro ekuronga uye kugadzirisa kumaka, Allocadia inosanganisira huwandu hwakawanda hwekugona kukubatsira Kumhanyisa Kushambadzira zvine hukasha, kuomarara, uye kufungidzira. Ichakuchengetera nguva nesimba mukuronga uye kubhajeti kuitira kuti ugone kuisa simba rakawanda pakuronga nekuita mishandirapamwe yekushambadzira inoyevedza mhedzisiro.
Allocadia nenhamba *:
Avhareji yenguva yakachengetedzwa pakuronga & bhajeti: 40-70%
Huwandu hwekuiswazve pasi pekuita mari: 5-15%
Net kuvandudza paKushambadzira ROI: 50-150%
Nguva yekubhadhara pane Allocadia kudyara: Pasi pemwedzi mipfumbamwe
* Sezvakataurwa nevatengi veAllocadia
Kushambadzira Performance Management Management Akanaka Maitiro
Kugonesa yako yekushambadzira mashandiro irwendo kuburikidza nematanho mashanu ekukura. Isu takapfupikisa aya matanho uye takanyatsoronga mafambiro aungaita kuburikidza nedanho rega rega mune yedu Kushambadzira Kuita Maturity Model. Mariri iwe unodzidza kuona kuti uripi nhasi, uye zvaunofanira kuita kuti ufambire padanho rinotevera.
Hezvino zvinoita semaonero kubva kumusoro:
Gadzira a Kushambadzira Center yeKunaka iyo inokwezva, inodzidzisa, uye inochengetedza yakanakisa tarenda mubhizinesi, kusanganisira vanhu vane yakasimba data uye analytical kugona.
Rongedza kuedza kwako neavo vari mukati Kutengesa uye Zvemari, kusvika padanho rekuti Mari mubatsiri anovimbwa uye Kutengesa kunonzwisisa kuti sei uye kupi Kushambadzira kunobatsira kumusoro kwepamusoro.
Ita zvakajeka, zviwanikwe, Zvinangwa zveSMART pamatanho ese esangano reKushambadzira, uye kutsiva 'zvisina maturo' metric sevashanyi vewebhu saiti uye email inovhura nematriki akaomarara senge mutengo-wega-mutobvu, mupiro wepayipi, uye ROI.
Bvisa data silos, inomira yakatenderedza yakatarwa taxonomy uye dhizaini, uye simbisa imwechete sosi yechokwadi yekushambadzira kushandisa uye kukanganisa. Sunga data rako rezvakanyorwa chiito.
Invest in a kushambadzira tekinoroji stack iyo inoshandisa zvazvino kukosha-akawedzera maturusi, aine mepu yakajeka yekuenda kwaunoda kuenda nesheaki yako bhizinesi parinowedzera. Pakati payo ichave yako CRM, yekushambadzira otomatiki, uye MPM mhinduro.
Unoda kuziva kuti unozvimisikidza sei paKushambadzira Performance Maturity Model? Tora ongororo yedu yekuongorora uye enzanisa mhedzisiro yako kune anopfuura mazana matatu evashambadzi pasi rese!
Tora Ongororo Yekushambadzira
Allocadia inoshandira makambani eB2B munzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Technology, Finance & Banking, Manufacturing, Business Services, uye Travel & Hospitality. Iyo yakanaka yevatengi vatengi ine timu ye25 kana kupfuura vatengesi uye / kana yakaoma, yakawanda-chiteshi nzira yekutengesa kazhinji inotora akati wandei geographies, zvigadzirwa, kana bhizinesi zvikamu.
Kushambadzira Performance Management Management Chidzidzo - Allocadia
Bhizinesi rezvemari bhizinesi rinomhanya-mhanya uye rinokwikwidza zvakanyanya, kunyanya kana iwe uchishandira iwo musika wezhinji. KuCharles Schwab, izvi zvinoshandura kuita bhajeti hombe uye inonwisa mvura yekushambadzira pamwe nekugadziriswazve uye dzimwe nzvimbo dzinodhura makumi mashanu neshanu. Kuita kuti zvinhu zviome zvakanyanya, timu paCharles Schwab inozvibata pamushandirapamwe wakanyanya, ichitarisira tarisiro ye -95% kusvika + 2% yebhajeti.
Allocadia akabatsira timu hombe iyi yevatengesi kuti vabude pamaspredishiti uye vasimbise yavo yekushambadzira mari mune imwechete, yakabatana, yakaenzana system yakachengetedza kwavo kudiwa kwekuchinja uye kuteerera kushanduka. Nemaitiro akareruka, anokurumidza ebhajeti uye kuoneka kuri nani muzvikwereti, vashambadzi paCharles Schwab vatariri varinani vebhajeti rekushambadzira uye varondedzeri varinani vane chekuita navo pabhizinesi.
Dhawunirodha Nyaya Yenyaya
Matanho mashanu ekukudza Kushambadzira Kwako Performance
Tags: allocadiazvakanakisisa zviitokushambadzira dashboardkushambadza kugonazvinangwa zvekushambadziraKushambadzira kuitaKushambadzira kuita manejimendipombi yekushambadzirakuronga kwekushambadzirazvirongwa zvekushambadzirakushambadzira tekinoroji stackmartech stackkuyerwa kushambadzirampmngwara
Kubatsira epasirese epamberi masangano ekushambadzira kuwedzera mari uye kuendesa hukuru hukuru kune vatengi vavo ne Allocadia Kushambadzira Performance Management papuratifomu, iyo yepasirose ine simba kuronga, bhajeti, uye kuita kwemanajimendi mhinduro
Mobile App Vavaki uye Nhare dzeWebhu Mapuratifomu Ebhizinesi Rako
6 Mazano Ekubatsira Vatengi Kubudirira Uchishandisa Yemagariro Midhiya